Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Abụọ 21:1-20
Jehoram malitere ịchị Juda (1-11)
Ịlaịja detaara Jehoram akwụkwọ ozi (12-15)
Jehoram nwụrụ ọnwụ ihere (16-20)
21 Jehoshafat mechara nwụọ otú nna nna ya hà nwụrụ, e lie ya ebe e liri nna nna ya hà n’Obodo Devid. Jehoram nwa ya nọchiri ya, malite ịchị.+ 2 O nwekwara ụmụnne ndị nwoke, ndị Jehoshafat mụrụ. Ha bụ Azaraya, Jehayel, Zekaraya, Azaraya, Maịkel, na Shefataya. Ha niile bụ ụmụ Jehoshafat eze Izrel. 3 Nna ha nyere ha ọtụtụ onyinye. O nyere ha ọlaọcha, ọlaedo, ihe ndị bara ezigbo uru, na obodo dị iche iche a rụsiri ike dị na Juda.+ Ma o nyere Jehoram alaeze ya,+ n’ihi na ọ bụ ya bụ ọkpara. 4 Mgbe Jehoram chịwara alaeze nna ya nyere ya, o ji mma agha gbuo ụmụnne ya niile+ iji mee ka ọchịchị ya sie ike. O gbukwara ụfọdụ n’ime ndị isi ndị Izrel. 5 Jehoram dị afọ iri atọ na abụọ mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịkwara afọ asatọ na Jeruselem.+ 6 Ọ nọ na-akpa àgwà ka ndị eze Izrel,+ otú ndị ezinụlọ Ehab kpara, n’ihi na ọ lụrụ nwa Ehab.+ Ọ nọkwa na-eme ihe dị njọ n’anya Jehova. 7 Ma Jehova achọghị ịla ezinụlọ Devid n’iyi, n’ihi na ya na Devid gbara ndụ,+ ya ekwe ya nkwa na a ga-enwe onye si n’ezinụlọ ya ga na-achị.*+ 8 Ọ bụ n’oge Jehoram na-achị ka ndị Ịdọm nupụụrụ ndị Juda isi,+ nwee eze nke ha.+ 9 Jehoram na ndị isi agha ya wee jiri ụgbọ ịnyịnya ya niile gaa ebe ahụ. O bilikwara n’abalị lụso ndị Ịdọm gbara ya na ndị isi na-agba ụgbọ ịnyịnya ya gburugburu agha, meriekwa ha. 10 Ma ndị Ịdọm ka na-enupụrụ ndị Juda isi ruo taa. N’oge ahụ, ndị Libna+ nupụkwaara Jehoram isi, n’ihi na ọ hapụrụ Jehova bụ́ Chineke nna nna ya.+ 11 Ọ rụkwara ebe ndị dị elu+ n’ugwu ndị dị na Juda, iji mee ka ndị bi na Jeruselem kpawa àgwà ka ndị akwụna, hapụ Chineke. O duhiekwara ndị Juda. 12 Ka oge na-aga, Ịlaịja onye amụma detaara ya akwụkwọ ozi.+ Ihe o dere n’akwụkwọ ozi ahụ bụ: “Jehova bụ́ Chineke Devid nna nna gị sịrị, ‘Ị naghị akpa àgwà ka Jehoshafat nna gị+ ma ọ bụ ka Esa+ eze Juda. 13 Kama, ị na-akpa àgwà ka ndị eze Izrel,+ nke mere ka ndị Juda na ndị bi na Jeruselem kpawa àgwà ka ndị akwụna, hapụ Chineke,+ otú ndị ezinụlọ Ehab+ si kpaa àgwà ka ndị akwụna. I gbudịrị ụmụnne gị,+ ndị ezinụlọ nna gị, ndị ka gịnwa mma. 14 N’ihi ya, Jehova ga-ebibi ndị gị, ụmụ gị, ndị nwunye gị, na ihe niile i nwere. 15 Ị ga-arịakwa ọtụtụ ọrịa. Otu n’ime ha ga-abụ ọrịa afọ. Ị ga-arịagide ya ruo mgbe eriri afọ gị ga na-awụpụta kwa ụbọchị.’” 16 Jehova mekwara+ ka ndị Filistia+ na ndị Arab+ ndị bi ndị Etiopia nso ghọọ ndị iro Jehoram. 17 Ha wee bịa lụso ndị Juda agha, kwakọrọ akụ̀ niile dị n’ụlọ* eze,+ dọrọkwa ụmụ ya ndị nwoke na ndị nwunye ya n’agha. Naanị nwa nwoke ha hapụụrụ eze bụ Jehoahaz,*+ bụ́ ọdụdụ nwa ya. 18 Mgbe ihe a niile mechara, Jehova mere ka Jehoram rịawa ọrịa afọ na-enweghị ngwọta.+ 19 Ka oge na-aga, mgbe afọ abụọ zuru ezu gwụchara, ọrịa ahụ mere ka eriri afọ ya wụpụta. Ọ nwụkwara mgbe ọrịa ahụ kara njọ. Ndị ya amụnyeghịkwa ihe na-esi ísì ọma ọkụ iji kwanyere ya ùgwù otú e meere nna nna ya hà.+ 20 Ọ dị afọ iri atọ na abụọ mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịkwara afọ asatọ na Jeruselem. O nweghịkwa onye o wutere mgbe ọ nwụrụ. Ha likwara ya n’Obodo Devid,+ ma, e lighị ya ebe a na-eli ndị eze.+
^ A na-akpọkwa ya Ehazaya.